ခေတ်ပြိုင်အိပ်ခန်းပရိဘောဂ | မှထုတ်လုပ်သူကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း Taiwan OEM ODM-bestparticleboardfurniture.com
ကျနော်တို့ကနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာများမှာ Taiwan ခေတ်ပြိုင်အိပ်ခန်းပရိဘောဂ ထုတ်လုပ်သူ, စက်ရုံ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းနှင့်တင်ပို့သူ။ တည်ငြိမ်တဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပေါ် မူတည်. ထက်သာလွန်အရည်အချင်းကိုနှင့်ကောင်းမွန်သောပြီးနောက်-ရောင်းချဝန်ဆောင်မှုကျနော်တို့စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ဦးဆောင်ထုတ်လုပ်သူများနှင့်တင်ပို့သူများတစ်ဦးအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကိုဖြစ်စေကြပြီ။ ကျွန်တော်တို့ဟာအရည်အသွေးထုတ်ကုန်များနှင့်စျေးနှုန်းအပြိုင်အဆိုင်နှင့်သင်တို့အဘို့အ-on အချိန် delivery မှာကတိပေးပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များနှင့်အတူနှစ်ရှည်စီးပွားရေးထူထောင်ခဲ့ကြပါပြီ။ သင်တို့သည်ငါတို့၏ထုတ်ကုန်မဆိုစံပြအတွက်စိတ်ဝင်စားပါက, အခမဲ့ဖြစ်ကျေးဇူးပြုပြီး ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ.
ပုံစံ - 010-17-1
Oliga အိပ်ခန်း set ကိုခေတ်မီ features,မြို့ပြစတိုင်.သံမီးခိုးရောင်ကျောက်အမှောင်ထဲမှာအရောင်နဲ့ဂန္ပိတ်ပင်အလင်းအရောင်အသုံးပြုသူများရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှစ်သိမ့်ခြင်းနှင့်ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စေသောတစ်ဦးကြားနေလေသံ compose.ဒါဟာအစသဘာဝအာကာသပေးသည်,ကြော့လေထု.မြို့ပြဘဝ၌ bustle သောသူတို့အဘို့,သားရေနှင့်အတူဆန့်ရိုးရှင်းသောပုံသဏ္ဍာန်နှင့်အပျော့ကူရှင်ချုပ်နှင့်အတူ headboard ရပ်တန့်လျှော့ပေါ့မယ့်စိတ်ကိုဖွစျစနေို.Oliga’s ကိုဓာတ်လှေကား-မှန်တက်အမျိုးမျိုးသောသိုလှောင်မှုနေရာများထောက်ပံ့.ဒါဟာပုံမှန်ထက်အချိန်မှာစားပွဲပေါ်မှာသို့မဟုတ်လုပျခှငျအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်.လိုအပ်သည့်အခါ,အဆိုပါစားပွဲထိပ်ကတံခါးကို၏အတွင်းပိုင်းအပေါ်ပူးတွဲပါမှန်ကိုပြသချီရနိုင်.သိုလှောင်ပုလင်းတညျဆောကျနှင့်အတူလွယ်ကူသောဖြစ်လာ-acrylic Grid အတွက်.အသုံးပြုမှုများအတွက်စားပွဲခုံအောက်မှာနေရာအမျိုးမျိုးလည်းရှိပါတယ်.
Headboard(W က 158cm x ကို: D 8cm က x H ကို 97.5cm),စုဝေးအိပ်ရာအခြေစိုက်စခန်း(W က 157cm x ကို: D 191.5cm က x H ကို 27cm),Headboard ကက်ဘိနက်(W 57cm x ကို: D 38cm x ကို H ကို 47cm),ဆေးထည့်စားပွဲ(W 96cm x ကို: D 53cm x ကို H ကို 78cm),ဆေးထည့်ကုလားထိုင်(W 37cm x ကို: D 37cm x ကို H ကို 66cm,နောက်ကျောအမြင့် 38cm),အံဆွဲ၏ရင်ဘတ်(W 90cm x ကို: D 46cm x ကို H ကို 78cm)
Backboard နှင့်အံဆွဲအောက်ဆုံး:8 မီလီမီတာ E1-backboard finish ကိုအတူ V313 ဘုတ်အဖွဲ့
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.bestparticleboardfurniture.com/my/contemporary-bedroom-furniture.html
ခေတ်ပြိုင်အိပ်ခန်းပရိဘောဂ ထုတ်လုပ်သူနှင့် ခေတ်ပြိုင်အိပ်ခန်းပရိဘောဂ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းစ OEM ODM-ကျော် 54,105 ကမ္ဘာတဝှမ်းဝယ်လက်မှာ bestparticleboardfurniture.com